Tranolay Teepee Indiana ho an'ny ankizy.
Teepee ho an'ny ankizy dia hevitra tsara amin'ny haingo amin'ny làlan'ny kilalaon-jaza na fetin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Ny tranolainy dia manana endrika mahazatra, kajaza amin'ny lamba matevina na lamba rongony ary vita amin'ny fanamboarana landihazo. Manana namolavola sy modely maro izahay - hamorona teepie ho an'ny zazalahy sy zazavavy izahay.
Ny tehina kesika dia amboarina sy ahosotra, ary miafina ao anaty tonelina natao tamin'ny vodiny izy ireo. Teepee ho an'ny ankizy, izay azo alaina ao amin'ny tranombarotra an-tserasera, dia noforonina tamin'ny fomba izay ahafahana mametaka ny rafitra rehetra amin'ny alalan'ny kofehy matevina amin'ny vakana. Ny tranolainy dia manana rindrina 5 sy base pentagonal, mahatonga azy ireo ho matanjaka kokoa ary lehibe kokoa noho ny teepee miaraka amin'ny faladiam-baravarana. Ny modely rehetra dia manana varavarankely an-kavanana.
Manamboatra tranolay any Polonina izahay, indrindra amin'ny vokatra avy any an-toerana. Izahay dia mitazona ny antsipiriany rehetra sy ny kalitao avo lenta. Ny fivarotana an-tserasera tipi dia misy torolalana ary fonony ho an'ny ankizy teepee. Ankoatra izany, ny olona mividy lay lay ho an'ny ankizy, ny fivarotana an-tserasera dia hanampy amin'ny fisafidianana tsihy teepee milamina, izay misy amin'ny endriny isan-karazany. Manasa anao izahay hanana fahafinaretana eto amin'ity tontolo ity.
Tranolain'i Teepee miaraka amina frills "vovony"
Tranolain'i Teepee miaraka amin'ny frills "satroka miloko"
Tranolain'i Teepee "pompoms Grey"
Tipi lay "Jeans"
Tranolain'i Teepee "Bordo" ho an'ny ankizy